Kwi-Al Ahly uwina eseCAF noma ubone owafika ngayo, Mosimane
July 9, 2021 July 8, 2021 Impempe.com
UPitso Mosimane uthi wagxuma wahlala ngesikhathi kuvela ithuba lokuqeqesha kwi-Al Ahly ngoba wasekhululeke kakhulu kwiMamelodi Sundowns. Uthi indlela elithakwe ngayo iqembu kwiSundowns wayengahlala aqhubeke azidlele amahlanga kwiligi isizini nesizini.
UMosimane uyishiye isiyiwine amahlandla amathathu kulandelana iligi iSundowns kanti iphinde yayiwina okwesine engasekho. Uthi ukukhululeka ngokwazi ukuthi isicoco seligi ngesakhe bekungasamkhulisi njengomqeqeshi.
Yingakho aqoka ukuya kwi-Al Ahly la okufuneka eseligi neseCAF Champions League ngaphezulu njalo ngesizini. Uma kungenzekanga lokho makhulu amathuba okuthi ibhantshi ligcwale umoya.
“Ngagxuma ngisuka kwiSundowns ngoba ngangazi ukuthi sengiqedile kwiDStv Premiership, asibeni neqiniso kulokho,” kusho uMosimane ekhuluma nezintatheli zeSafja kuleli sonto.
“Noma ngabe yimuphi umqeqeshi engayiwina iligi eNingizimu Afrika uma eneqembu elinjengaleli leSundowns. Futhi leliya qembu lingayiwina nje iligi kule minyaka emine ezayo kulandelana, angikungabazi lokho,” kuqhuba uMosimane.
Izinto azimile kahle kwiligi yase-Egypt kuMosimane kodwa usethubeni elihle lokuyidla iChampions League. Uzobhekana neKaizer Chiefs kowamanqamu ngoJulayi 17. UMosimane wazi kahle ukuthi ukuqhubeka kwakhe kwi-Al Ahly kuncike ekuwineni le ndebe.
“E-Egypt, uma ungayiwini iChampions League neligi kungafuneka uvele usheshe uziqoqele imithwalo yakho ubone ofike ngayo. Kodwa yingakho ngilana nje. Ngifuna khona ukuphila ngiqalaza kanje. Uma ngiseNingizimu Afrika ngisendaweni engaziyo ukuthi ngiphephile (ngokomsebenzi) kuyo bese kwenzakalani?
“Sengidelile ukuba semsebenzini ophephile. Kumele ngibe sendaweni la ngizohlale ngithukile khona ukuze ngizibone ukuthi ngiphetheni. Phela kulula ukuba sendaweni oyijwayele ulokhu uziwinela nje.
“Mina ngithanda la kunzima khona ukuze ngibhekane nezinselelo. Abanye abaqeqeshi bafuna ukuhlala la bejwayele khona belokhu bephindaphinda into eyodwa, impilo yabo leyo,” kuchaza uMosimane.
Uvumile nokho ukuthi nakwiSundowns ikhona ingcindezi kuwukuthi eyokuwina iligi yakuleli kuphela, abanankinga kakhulu uma uhlulekile kwiChampions League.
FUNDA NALA: Engabe uMato uyoba yibamba kuze kube nini kwesePSL?
“Ngabhekana nakho lapho eNingizimu Afrika ngeligi ngoba ngicabanga ukuthi uma ungayiwinanga iligi ungazithola sewuxoshwa kwiSundowns. Kodwa anginsaso isiqiniseko ukuthi bengakuxoshela ukuhluleka kwiChampions League ngoba wudaba oluhlukile lolo.
“Kudlalwa ngendlela ehlukile kuyo futhi udinga amava aqinile impela. Akukhona nje ukuthi uliphasa kahle kanjani ibhola. Kuningi okuhlukile. Kumele ube nabadlali abafanele namaqhinga afanele ngoba ngeke udlale ngendlela odlala ngayo kwiligi yangakini,” kusho uMosimane.
Previous Previous post: UMato uyobamba kuze kubuye uJesu yini kanti kwesePSL?
Next Next post: UNurkovic usejahe ukungena enkundleni aqede umsebenzi